Vaovao indostrialy - fitaovana fampitaovana siansa ho an'ny Shenzhen Simida Co., Ltd.
Masinina manafangaro sy manala baraka
Fanararaotana fanalefahana vacuum
Mpifangaro vovoka fitantanan-drindrina mifehy ny mari-pana
Centrifuge mandeha ho azy
Masinina fanapahana laser
CCD sisiny mitady milina fanapahana
Milina fitadiavana sy fanapahana mandeha ho azy
Masinina fanamarihana laser fibre optika amin'ny tanana
Milina fanamarihana sy famoahana mandeha ho azy
Masinina fanamarihana laser maintso
Masinina fanamarihana laser mandeha ho azy
Stripper mandeha ho azy
Masinina saron-tava Auto KN95 feno
Masinina saron-tava Semi Auto KN95
Masinina misaron-jaza feno famonoana fiara feno
Masinina misaron-jaza feno fanary fiara feno
Mpangaro deaeration centrifugal centrifugal
Mpifangaro afovoan'ny planeta tsy misy banga
Mpifangaro afovoany afovoany planeta
Home > News > Vaovao indostrialy
Ireo singa amin'ny milina fanamarihana laser
Ny masinina fanamarihana laser dia misy faritra dimy, izany hoe laser, solomaso laser, galvanometra, karatra marika ary solosaina, ampahany amin'ny masinina amin'ny akorany.
Ny milina fanapahana fibre optika dia anjakan'ny fahombiazany
Tena mahomby tokoa ny mpanaparitaka ny fibre.
Fanadihadiana ny tombony sy ny fatiantoka ny milina fanapahana laser
Voalohany indrindra, ny fanapahana laser dia fanapahana tsy mifandray, madio, azo antoka ary tsy misy loto. Mandritra ny fanapahana laser, ny lohan'ny laser an'ny Machine Cutting Laser dia tsy mifandray amin'ny workpiece ary tsy misy fitafiana fitaovana.
Ahoana no hitazomana centrifuge famoahana mandeha ho azy
Isaky ny fampiasana tsirairay dia sokafy ny sarony fanalefahana centrifuge mandeha ho azy mba hamela ny hafanana na ny hamandoana hipoipoitra voajanahary. Raha nampiasa centrifugation mari-pana ambany ny centrifuge mandeha ho azy teo aloha dia mety misy ny ranomandry, koa andraso mba hitsonika ny ranomandry ary hamafa ny lamba landihazo maina Madio, ary akatona ny fonony rehefa tsy misy hamandoana miharihary.
Ahoana ny fomba hitsarana raha mendrika ny centrifuge box
Araka ny olana momba ny fiarovana an'ny Box centrifuge, Box centrifuge dia karazana fitaovana haingam-pandeha. Ahoana no fomba hitsarako raha mahafeno fepetra ny fitaovana rehefa mividy Box centrifuge? Ireto misy fepetra takiana amin'ny Box centrifuge dia singa lehibe. Raha zavatra iray tsy mahafeno ny fepetra takiana, ny fahombiazan'ny fiarovana Centrifuge dia tsaraina tsy mendrika.
Fikojakojana vovoka fluorescent isan'andro
Alohan'ny hampiasana ny centrifuge vovoka Fluorescent dia tokony tapahina ny herinaratra ary tokony havoaka aloha ny frezy centrifuge.
Address: 12 / F, fananganana B, Quanju Industrial Park, Gongming General Shipinggang, Distrika Guangming, Shenzhen City, Guangdong Province, Sina
Ny SMIDA dia manatrika fampiratiana laser sy fizotran'ny fizotran'ny fizotran'ny fizaran-taona amin'ny fampiharana ny china South China (Guangzhou)2020/07/28
Sina atsimo, ho ivon-toeram-pamokarana sy faritra indostrialy maivana indrindra eto amin'ny firenena.
Fizakà-manana @ 2019-2021 Shenzhen Simida Intelligent Equipment Co., Ltd. Zo rehetra voatokana.